Rev. Mr. Martin Ma Na Ling - Eucharistic Congress
ဒီကင်ဟင်နရီမနာလင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၊ချင်းပြည်နယ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။အထက်တန်းကျောင်းအပြီး တွင်Assumption Seminary သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာကို လေးနှစ်ကြာ လေ့လာခဲ့တယ်။ သူ သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တွင် စီးပွားရေး ဘွဲ့ တစ် ခု ရရှိ ခဲ့ ပြီး ၊ နောက် နှစ်တွင် Saint Joseph Majar Seminary ကျောင်းတိုက် သို့ ဝင်ရောက် ခဲ့ ပြီး ၊ ဒဿနိကဗေဒ ပညာကိုရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုနှစ်နှစ်လေ့လာခဲ့သည်။ Michael’s Major ကက်သလစ် ဓမ္မကျောင်း တွင် လေ့လာ မှု များပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ကင်တပ်ကီပြည်နယ်၊ အိုဝမ်စ်ဘိုရို ၏ ဂိုဏ်းအုပ် ၊ Bishop William Medley က ၊ ဒေသခံ siminarian ဖြစ် လာ ရန် ဖိတ်ခေါ် ခဲ့ သည် ။၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလတွင် Saint Meinrad Seminary and School of Theology မှ ဆရာ ကြီး ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ဇူလိုင်လ၂၀၂၂ တွင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်သိတ်ခါတင် ခံရ မည်။
A native of Chin State, Myanmar, Deacon Martin Ma Na Ling entered Assumption Seminary after high school. He studied English there for four years. He receivedabachelor’s degree in economics in 2013 and entered St. Joseph’s Major Seminary the following year, completing two years of philosophical studies.
After studies at Michael’s Major Catholic Seminary, he was invited by Bishop Lucius Hre Kung and Bishop William Medley, Bishop of Owensboro, Kentucky, to becomeaseminarian for the diocese. In May 2021, he graduated from St. Meinrad Seminary and School of Theology withaMaster of Divinity degree. He will be ordainedapriest on July 2.